Thwebula Hotspot Shield 6.2 Free – Windows – Vessoft
Hotspot Shield – isofthiwe ukuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo in the internet. Isofthiwe ukumbuyisela uxhumano phakathi kwekhompyutha yomsebenzisi kanye server Hotspot Shield, olunikeza ukuphequlula engaziwa zamakhasi ewebhu ngenxa yoshintsho isikhashana IP-ikheli. Hotspot Shield isinikeza ukufinyelela okuqukethwe uncensored namawebhusayithi ivinjiwe ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Hotspot Shield inikeza ukudluliswa kwedatha okuphephile phezu uxhumano zombhalo kanye isivikelo spyware.
Usekela zakheka namanethiwekhi e-Wi-Fi
An ukuhlala engaziwa internet
Ukufinyelela izingosi zazihlolwa
ukubethela Automatic traffic
Notepad++ 7.3 Standard futhi Portable
English, Afrikaans, Українська, Français... GPU-Z 1.16